Filtrer les éléments par date : vendredi, 01 novembre 2019
vendredi, 01 novembre 2019 19:59
Fikambanana SAFIDY: Manentana ny olom-pirenena hifidy
Nanantotosa loa-bary an-dasy teto Antsirabe ny SAFIDY na ny “Sampana Anaraha-maso ny fifidianana, Ivon’ny Demokrasia Ifarombonana”, ny talata 29 oktobra teo, ho fiatrehana ny fifidianana.
Sampana iray mivondrona ao anatin’ny vovonana ROHY ity fikambanana ity, ka tanjona ho azy ireo ny hanentana sy hampiakatra ny tahan’ny fandraisan’anjaran’ny olom-pirenena, mba hifidy amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao.
Hanara-maso ny fifidianana izy ireo, ary hampakatra izay endrika tsy fanarahan-dalàna amin’ny ambaratonga tokony hanaovana izany.
vendredi, 01 novembre 2019 19:32
Toliara: Lany ny « vignette » ho an’ny bisikilety ny Kaominina
Nanao fampahafantarana ny fiadidiana ny tanànan’i Toliara, fa lany ny « vignette » ho an’ny bisikilety, ka omena alalana ny tompon'ny bisikileta rehetra hifamezivezy. Tsy azon'ireo Polisy Monisipaly atao ny misava « vignette » bisikileta mandram-pisian'izany, hoy hatrany ny filazana.
vendredi, 01 novembre 2019 19:23
Andilamena: Maty voatifitra i Mbaza, dahalo raindahiny
Dahalo iray maty, telo hafa naratra, raha nifanandrina tamin’ny Zandary tao Mangabe Kaominina Antanimenabaka, Distrika Andilamena, Faritra Alaotra-Mangoro, ny marainan’ny talata 29 oktobra 2019 tamin'ny 5 ora sy sasany.
Dahalo am-polony no nanao andiany tamin’io, ka lavo tamin’izany i Mbaza na Shel. Nentin’ireo namany nitsoaka ireo naratra. Tavela ny basy kalachnikov iray, miaraka amin’ny fanafody gasy ary masolavitra fampiasan’ireo dahalo.
Tsy nisy voakitika kosa ny mpitandro ny filaminana.
vendredi, 01 novembre 2019 19:01
Antoko MONIMA: « Tsy vitan’ny fanjakana ny niaro ny aina sy ny fananan’ny olom-pirenena »
Nanao fanambarana momba ny fanafihan-dahalo nitranga tao Beakanga, Kaominina Marotsiraka, Distrikan'Amboasary Atsimo tamin’ny alakamisy 24 oktobra 2019 teo ny antoko MONIMA.
Omby 70 eo ho eo no voaroban’ny dahalo ; niantso vonjy tamin’ny mpitandro filaminana ireo voaroba fa tsy nisy akony. Raikitra ny fifanjevoana sy ny fifandonana teo amin’ny tompon’omby sy ireo nandroba. Olona maherin’ny 30 no maty avy amin’ny andaniny sy ankilany, hoy ny fanambarana.
Nahitsy ny tenin’ny MONIMA milaza fa « tsy vitan’ny fanjakana ny niaro ny aina sy ny fananan’ny olom-pirenena, raha ity tranga ity no jerena ».
vendredi, 01 novembre 2019 18:51
Toamasina: Taribin-jiron’ny Jirama mirefy 2500m nisy nangalatra
Nisy nangalatra ny taribin-jiron’ny Jirama mirefy 2500 metatra amin’ny tambazotra vaovao, manana tanjaka 35KV, mitondra herinaratra miainga any Volobe manketo Toamasina. Androany 1 novambra 2019, tokony ho tamin'ny iray ora maraina tany ho any no nitrangan’ny halatra.
Ahiana ny hisian'ny fahatapahan-jiro amin’ny faritra maromaro eto Toamasina noho ny tsy fahampian'ny herinaratra tonga eto an-toerana, noho ity fahabangana taribin-jiro ity.
Am-perinasa ny teknisian’ny Jirama manolo ilay taribin-jiro ka vinavinaina ho vita anio alina ny asa.
vendredi, 01 novembre 2019 18:46
Fampianarana: Nesorina ny sefo Cisco Antsiranana I sy sefo Cisco Antsiranana II
Raharinaivo Rémi indray no sefo Cisco Antsiranana I, ary Randriamiadana Thierry no sefo Cisco Antsiranana II. Nesorina tamin’ny toerany i Marie Annick, sefo Cisco Antsiranana I teo aloha, sy Jao Arsène sefo Cisco Antsiranana II teo aloha.
Natao avy hatrany ny famindram-pitantanana.
vendredi, 01 novembre 2019 18:37
Tanà-Masoandro: Nandefa taratasy any amin’i Andry Nirina Rajoelina i Rivo Rakotovao
Nandefa taratasy amin’ny Filohan’ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao ny 30 oktobra 2019, mampahafantatra ny votoatin'ireo fihaonana in-droa miantaona notanterahin’ny loholona tamin’ny mponina avy amin’ireo Kaominina voakasiky ny fanatanterahana ny tetikasa Tanà-Masoando.
Taratasy niarahana tamin’ireo Loholona avy amin’ny Faritanin’Antananarivo izy ity, mandravona ny votoatin’ny dinika tamin’ny nandalovan’ireo solontenan’ny mponina teo anivon’ny Antenimierandoholona, ny 29 oktobra 2019, sy ny fidinana ifotony teny Ambohitrimanjaka notanterahin’ny Loholona avy amin’ny Faritanin’Antananarivo, ny 21 oktobra 2019.
Ny andininy faha 81 amin’ny Lalampanorenana no mamaritra ny anjara andraikitry ny Antenimierandoholona, dia ny fisolotena ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy. Anisan’ny fomba hanatanterahana izany ny fihaonana fakan-kevitra amin’ny vahoaka.
vendredi, 01 novembre 2019 18:14
Nosy Be - Hell Ville: Botry saron’ny Tafika an-dRanomasina Malagasy nitrandraka dingadingana an-tsokosoko
Nandritra ny fisafoana nataon’ny sambo « RC Trozona » an’ny tafika, izay manaramaso ny fari-dranomasin’i Madagasikara, no nahitana an’ity botry mitrandraka an-tsokosoko dingadingana an-dranomasina ity teo Banc de Leven, izay fari-dranomasina avaratr’i Nosy Be - Hell ville.
Saika tsy hijanona ilay botry raha tsy nanao tifi-danitra ny Tafika. Dingadingana roa koveta miampy fitaovana maromaro izay raran’ny lalàna ny fampiasana azy no sarona.
vendredi, 01 novembre 2019 17:56
Rivo Rakotovao: Nitarika delegasiona mamonjy fikaonan-doha any Maroc
Any Rabat Maroc ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao, mitarika delegasiona loholona Olga Ramalason sy Harisson Benessy, hiatrika fikaonan-doha lehibe iraisan’ny Antenimierandoholona rehetra manerana an’i Afrika sy ny Tany Arabo, miaraka amin’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fambolena sy ny sakafo (FAO). Ny loha-hevitra amin’izany moa dia mahakasika ny Fanjariana ara-tsakafo.